Jose Mourinho Oo Doonayay ‘Inuu Foolka Ka Jabiyo Arsene Wenger’ Ka Dib Markii Ay Isagu Dhaceen Juan Mata Dartiis. - Wargane News
Home Sports Jose Mourinho Oo Doonayay ‘Inuu Foolka Ka Jabiyo Arsene Wenger’ Ka Dib...
Jose Mourinho ayaa doonayay inuu foolka ka jabiyo Arsene Wenger ka dib markii ay labada nin isagu dhaceen Juan Mata, sida lagu sheegay buug cusub oo laga qoray tababaraha reer Portugal.
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger iyo macalinkii markaas ee Chelsea Jose Mourinho ayaa naceybkii ay isku hayeen uu soo baxay ka dib markii uu Juan Mata uu u wareegay Manchester United bishii Janaayo 2014 oo uu ka tagay Blues.
Wenger ayaa markaas sheegay inay lama filaan ku aheyd heshiiskaas madaama uu aaminsanaa in Chelsea aysan ciyaaryahan weyn ka iibineynin koox si toos ah ugula xafiiltameysa horyaalka.
Waxa uu sidoo kale sheegay in Mourinho uu ka baqayay inuu guuldareysto, taasoo keentay in Mourinho uu isna ku tilmaamo Wenger nin ku takhasusay guuldarada.
Markii ay hadaladaas saxaafada isku mariyeen ayaa Mourinho waxaa lagu waramayaa inuu u sheegay Rob Beasley oo ah qoraaga buuga Jose Mourinho ee Up Close and Personal: “Maalin uun waxaan Wenger ku arki doonaa meel ka baxsan garoon kubadeed, waxaana ka jabin doonaa foolka.”
Qoraaga buugaan cusub Beasley ayaa sidoo kale sheegay in Mourinho uu ku tilmaamay Wayne Rooney ‘wiilka cayilan’ – inkastoo uu si weyn u doonayay inuu Chelsea keensado.